YEYINTNGE(CANADA): Monday, March 08
http://ifile.it/kxvwh2rStatement No-3-2010 of bur Summary only...
8 March 2010 ဒိုင်ယာရီ
http://ifile.it/w0zcj258 March 2010 Yeyintnge Diary Summary only...
Saskatoon Declaration of 3rd Burma Forum Canada
3rd Burma Forum Canada Saskatoon Declaration Saskatoon, Canada March 7, 2010 The 3rd Burma Forum Canada was successfully held from March6to 7, 2010 in Saskatoon, Canada. More than 50 Burmese organizational representatives including ethnic nationalities across Canada and representatives from National Coalition Government of Union of Burma (NCGUB), the Burmese government in exile, Ethnic Nationalities Council (ENC) and Euro-Burma Office (EBO) participated. A wide range of Burma-related issues such as international polices towards Burma, analysis on 2010 elections and possible scenarios, and the role of ethnic nationalities in the political process in Burma were discussed. The Forum participants unanimously agreed to announce the following: Current Situations & Concerns in Burma The Forum is increasingly concerned that the military junta continues to ignore calls by Canada and the larger international community to show concrete commitments to political reforms. The Forum is also concerned by the ongoing military offensives, and other forms of atrocities including displacement, religious persecution, politically motivated and arbitrary arrests in the context of the elections planned for later this year. Appreciations: 1) The Forum wholeheartedly welcomes and appreciates the official announcement made at the Forum by Ms. Kelly Block (MP- Saskatoon-Rosetown-Biggar) on behalf of the Honourable Beverley J. Oda, Minister of International Cooperation that the Government of Canada would continue support for Burmese refugees and displaced persons living in Burma's border areas in the amount of $15.9 million over five years; 2) The Forum would also like to express the deepest appreciation on strong political and financial support provided by Canadian Friends of Burma (CFOB), Canadian NGO Committee (CNC), Saskatoon Burmese Community, and Euro-Burma Office (EBO), as well as other organizations and individuals who helped make this important Forum happen; 3) The Forum also thanks the Government of Canada for strong and consistent support for national reconciliation and democracy in Burma including political and economic measures against the Burmese military junta in November, 2007 and conferring the Canadian Honorary Citizenship Award to Daw Aung San Suu Kyi in May, 2008. Policy issues: The Forum strongly believes that: a) The 2010 elections is notasolution and will not bring democracy to Burma; b) The deteriorating political and human rights conditions in Burma are not favorable to holdamulti-party election. This is the time to work to resolve existing problems throughaproper consultation with all the stake-holders in the nation. c) If SPDC forcibly continues to go ahead without having meaningful and inclusive dialogue with democratic and ethnic leaders inside the country, the election will not be internationally acceptable and credible; d) All prisoners of conscience including Daw Aung San Suu Kyi must be freed unconditionally, and all Burmese citizens must be able to freely participate in the political process so that the elections can be considered credible, free and fair. e) Military offensives, gross human rights violations and all kinds of atrocities, especially in the ethnic nationalities areas must be ceased; f) Only the people and their trusted leaders inside the country have the legitimate mandate to decide whether or not they should take part in the elections. The Forum will respect their decision. The Forum also strongly believes that: a) Recognition to the crucial role and active participation of ethnic nationalities in the national political process is essential for long-lasting peace and prosperity in Burma. A tripartite dialogue remains the best viable means towards achieving these goals. b) Federalism and democratic governance is the only path towardsaunited, peaceful and prosperous nation. c) Any dialogue between the military junta and the opposition should be pursued withinatime-bound framework. d) Respect for the rights of women and their active participation in the national political process are essential to the democratic governance and social harmony. The Forum calls upon the Government of Canada: a) To maintain the existing political and economic measures towards Burma until all the concerns of the Canadian government and people are adequately met by the Burmese authorities. b) Express concerns over Burma’s obvious nuclear ambition and questionable relations with the North Korean regime, and to put pressure on the military junta to comply with the international non-proliferation treaty especially with regards to UN Security Council Resolutions 1874 and 1718. c) To reiterate the importance of havingadirect and meaningful dialogue between Senior General Than Shwe and Daw Aung San Suu Kyi, which will lead toalevel of national dialogue participated by all key stakeholders, including the ethnic nationalities. d) To extend Canadian government’s effort and support at the multilateral level including an UN ‘Commission on Inquiry’ of Crimes against Humanity in Burma; e) To have active coordination with its international partners for the emergence of “International Forum on Burma” in Asia as soon as possible; f) To demand that the military junta immediately stop ongoing attacks on civilians in eastern Burma, including the renewed attacks on Karen civilians in recent months. g) To demand that the junta cease the unjustified pressures being exerted on the ethnic cease-fire groups to become the “Border Guard Force” ahead of the elections. h) To substantially expand its resettlement program for the vulnerable Burmese refugees including political dissidents. i) To ensure all humanitarian assistance package provided by Canadian government to the targeted groups and people in need. In conclusion, the Forum participants reaffirm their commitment to continue to work together, and call upon diverse Burmese community across the globe to stand united until the people of Burma overcome the existing political, socio-economic and humanitarian crises and able to freely enjoy their full democratic and human rights in the Union of Burma. 3rd Burma Forum Canada
ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားကောင်စီ - မြန်မာနိုင်ငံ (National Council of Union of Myanmar - NCUM) မှ ထုတ်ပြန် ထားသော Manifesto နှင့် ပတ်သက်၍ မဟာဗျူဟာ နှင့် မူဝါဒရေးရာဌာန ညွန်ကြားရေးမှူး ဖြစ်သူ မခင်မမမျိုးထံ ဟံသာဝတီ မှ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ မခင်မမမျိုးမှ ယခုလို ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ပြန်လည် ဖြေကြား ခဲ့ပါတယ်။မေး။ ။ ပြည်ထောင်စု အမျိုးသားကောင်စီ - မြန်မာနိုင်ငံ အကြောင်းကို ပြောပြပေးပါ။ဖြေ။ ။ ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားကောင်စီ - မြန်မာနိုင်ငံ ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်မှန်တဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးနဲ့ အောင်မြင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင် ကူးပြောင်း မှုများ ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ချက်ကို သိမြင် ထားကြတဲ့ အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင် တော်လှန်ရေး လှုပ်ရှားမှုထဲက လူပုဂ္ဂိုလ် တွေနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ပူးပေါင်းထားတဲ့ တပ်ပေါင်းစုကြီး တခုဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားကောင်စီ - မြန်မာနိုင်ငံ အနေနဲ့ တရားမျှတမှု၊ တန်းတူ ညီမျှမှုနဲ့ အမျိုးသား သင့်မြတ်ရေး၊ အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အပေါ်မှာ အခြေခံထားတဲ့ ခေတ်မှီ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သော ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက်နိုင်ရေးကို သမိုင်းပေး တာဝန်တရပ်အနေနဲ့ အပြည့်အ၀ ယုံကြည်ပါတယ်။မေး။ ။ ဒီသမိုင်းပေး တာဝန်ကို ဘယ်လို လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်တွေနဲ့ အကောင် အထည်ဖော် သွားနိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလဲ။ ဖြေ။ ။ ဒီသမိုင်းပေး တာဝန်ကို အောင်မြင်စွာ အကောင် အထည်ဖော် နိုင်ဖို့အတွက် အဆင့် ခုနစ်ဆင့် လိုအပ်တယ်လို့ တွေ့မြင် ထားပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ခုနစ်ဆင့် ကတော့(၁) စစ်အာဏာရှင် စနစ်အောက်တွင် နှစ်ပေါင်း လေးဆယ်ကျော် ကာလ တလျှောက် ဖိနှိပ် ချုပ်ချယ် ခံခဲ့ရသော မြန်မာ တမျိုးသားလုံး လွတ်မြောက်ရေး အတွက် အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှား မှုကြီးကို အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရန်(၂) အချုပ် အခြာ အာဏာပိုင် ကြားဖြတ် အစိုးရ ကောင်စီအား ဖွဲ့စည်းရန်။ ယင်းသို့ ဖွဲ့စည်း ရာတွင် အလွှာမျိုးစုံ ၊ လူမျိုးပေါင်းစုံကို ကိုယ်စား ပြုသော အဖွဲ့ အစည်း များနှင့် ပူးပေါင်း ညှိနှိုင်း အကောင် အထည်ဖော် ဆောင်ရန်။ လိုအပ်ပါက ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ မှ အကြံဥာဏ် တောင်းခံ ဆောင်ရွက်ရန်။ (၃) အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲကြီးအား ခေါ်ယူ ကျင်းပရန် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေ မူကြမ်းကို ရေးဆွဲရန်(၄) ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ ကျင်းပ၍ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ မူကြမ်းကို တင်ပြ အတည် ပြုရန်(၅) ဖွဲ့စည်း အုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေနှင့် အညီ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန်(၆) ဒီမိုကရေစီ၊ လူ့အခွင့်အရေး နှင့် လူမှု တရားမျှတမှု အပေါ်တွင် အခြေခံသော လူ့ဘောင် သစ်ကို တည်ဆောက်ရန်(၇) ဖြောင့်မတ် မှန်ကန်သော နည်းစနစ်များ နှင့် မူဝါဒများကို အသုံးပြု၍ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး ကို တည်ဆောက်ရန် တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။မေး။ ။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့် ခုနစ်ဆင့်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာ အရပ်ရပ်ကို ဖြေရှင်း နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည် ပါသလား။ဖြေ။ ။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့် ခုနစ်ဆင့်မှာ အဆင့် တိုင်းဟာ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး ဖြစ်ပေါ် ပြောင်းလဲမှု ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက် တွေကို အခြေခံ ထားပါတယ်။ ပထမ အဆင့်ဟာ စစ်အာဏာရှင် စနစ် တိုက်ဖျက်ရေး နဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင် ကူးပြောင်းရေး၊ ဒုတိယ အဆင့်က အသွင် ကူးပြောင်း ကာလ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တတိယ အဆင့်ဟာ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး၊ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရေးနဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အခြေခံ အုတ်မြစ်ဖြစ်တဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရေး၊ စတုတ္ထ အဆင့်က ပြည်သူ လူထုရဲ့ ဆန္ဒ သဘောထား အစစ်အမှန် ရရှိရေး၊ ပဉ္စမအဆင့်က စစ်မှန်၍ တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရေး၊ ဆဌမ အဆင့်က ဒီမိုကရေစီ အသွင် ကူးပြောင်းမှု ဖြစ်စဉ်ရဲ့ အရေးကြီးဆုံး ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ရှင်သန်ခိုင်မာရေး၊ သတ္တမ အဆင့်က အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး စတဲ့ သဘော တရားတွေ အပေါ်မှာ အခြေခံပြီးမှ ပေါ်ထွက် လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလုပ်ငန်းစဉ် ခုနစ်ဆင့်နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မယ် ဆိုတာ အပြည့်အ၀ ယုံကြည်ပါတယ်။မေး။ ။ ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားကောင်စီ - မြန်မာနိုင်ငံ က ချမှတ်ထားတဲ့ ဦးတည်ချက်နဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အောင်မြင်စွာ အကောင် အထည် ဖော်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါသလား။ဖြေ။ ။ မဟာဗျူဟာ သဘောတရားအရ ဘယ်လို နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ဦးတည်ချက်တွေမှာ မဆို Ends ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်ရယ်။ Ways ဆိုတဲ့ သွားမယ့် လမ်းကြောင်းရယ်၊ Means ဆိုတဲ့ resources ရယ် သုံးမျိုးလုံး ပြည့်စုံမှ အောင်မြင် နိုင်ပါတယ်။ အခု ပြည်ထောင်စု အမျိုးသားကောင်စီ - မြန်မာနိုင်ငံ က ချမှတ် ထားတဲ့ တရား မျှတမှု ၊ တန်းတူ ညီမျှမှုနဲ့ အမျိုးသား သင့်မြတ်ရေး ၊ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အပေါ်မှာ အခြေခံ ထားတဲ့ ခေတ်မှီ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်သော ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက် နိုင်ရေး ဆိုတဲ့ သမိုင်းပေး တာဝန်ဟာ ပန်းတိုင် (Ends) ကို ကိုယ်စား ပြုပါတယ်။ လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့် ခုနစ်ဆင့်က သွားမယ့် လမ်းကြောင်း (Ways) ကို ကိုယ်စားပြု ထားပြီး၊ ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားကောင်စီ - မြန်မာနိုင်ငံ နဲ့အတူ မြေပေါ် မြေအောက် အသွင် သဏ္ဍာန် အမျိုးမျိုးနဲ့ လက်တွဲ ဆောင်ရွက် နေကြတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ resources တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။အခုအခါမှာ ဆိုရင် စစ်အာဏာရှင် စနစ်ကို ပြတ်သားစွာ ဆန့်ကျင်ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို ဖော်ဆောင်ဖို့ ရည်ရွယ် ထားကြတဲ့ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေနဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ လုပ်ငန်းစဉ် ပထမ အဆင့်ဖြစ်တဲ့ အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုကြီးမှာ တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ ချိတ်ဆက်လှုပ်ရှား သဏ္ဍာန်နဲ့ဖြစ်စေ၊ case-by-case သဏ္ဍာန်နဲ့ဖြစ်စေ တစထက်တစ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပူးပေါင်း လှုပ်ရှား နေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ပူးပေါင်း ချိတ်ဆက် လှုပ်ရှားမှုတွေ အရှိန် ကောင်းလာ လေလေ၊ အောင်မြင်မှု ပန်းတိုင်နဲ့ ပိုပြီး နီးလာလေလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုကြီးကို လက်တွဲ ၀န်းရံပြီး တက်တက် ကြွကြွ ပူးပေါင်း ပါဝင်ကြဖို့ ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ နိုင်ငံရေး အင်အားစုများ အပါအ၀င် မြန်မာ တစ်မျိုးသားလုံးကို လေးစားစွာ တိုက်တွန်း ပြောကြား လိုပါတယ်။၈ . ၃ . ၂၀၁၀ l HTWDhttp://www.nfacforburma.info/2010/03/ncum_08.html Summary only...
၀ အား နအဖ အင်အားသုံးခြေမှုန်းတော့မည်လော
၀ အား နအဖ အင်အားသုံးခြေမှုန်းတော့မည်လော Monday, 08 March 2010 19:32 သျှမ်းသံတော်ဆင့် ၀ ပြည်သွေးစည်းရေး တပ်မတော် ခေါင်းဆောင် ပေါက်ယူချမ်း နှင့် နအဖ ကိုယ်စားလှယ် ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့် တို့ တန့်ယန်း၌ တွေ့ဆုံ ဆွေးခဲ့သော်လည်း အပေါင်း လက္ခဏာမဆောင်ဘဲ စစ်ရေးအပြိုင်ဖြည့်တင်းလာ ခဲ့သည်။ “နအဖ ခြိမ်းခြောက်ထားတဲ့အတိုင်း တကယ် လုပ်မယ်ဆိုရင် ဒီလ 15 ရက် နောက်ပိုင်း တိုက်ပွဲ ဖြစ်နိုင်တယ်” - ဟု ၀စစ်ဘက် ရေးရာ အရာရှိ တဦးကပြော၏။ ဖေဖေါ်ဝါရီ 25 ရက် တန့်ယန်းတွေ့ဆုံပွဲပြီးနောက်ပိုင်း ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်က ယူနန်ပြည်နယ် တရုတ်အာဏာပိုင်များ ထံ ယခုလစောစောပိုင်းက စာရေးအကြောင်းကြားခဲ့သည်ဟု ဆို၏။1. ၀ တပ်ဖွဲ့အား နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရန် အကြိမ်ကြိမ်တိုက်တွန်းခဲ့သော်လည်း တစုံတရာ လိုက်လျောခြင်းမရှိသည့်အပြင် ထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက် ၀ တပ်ဖွဲ့များ၊ နအဖ ဖွဲ့စည်းပုံအရ မိုင်းယန်းမြို့နယ် မိုင်းဖျဲန် နှင့် မိုင်းပေါက်ဒေသ အခြေစိုက်တပ်များ အားလုံးရုပ်သိမ်းပေးရန်။2. မတ်ခ်ျ 10 ထက်မကျော်ဘဲ နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရေးအတွက် ချွင်းချက်မရှိ သဘောတူ လက်ခံရန်။ (ဧရာဝတီသတင်းဌာန ထုတ်ပြန်ချက်တွင်လည်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာန ၀မ်ကြားရူး မတ်ခ်ျ4ရက်နေပြည်တော်ရောက် စဉ် နအဖ တို့ ပြောကြားခဲ့သေးသည်ဟုဆို၏။)3. နယ်ခြားစောင့်တပ်အသွင်ပြောင်းရေးအတွက် မတ်ခ်ျ 15 ရက်နေ့အထိ အကြောင်းမပြန်ပါက အင်အားသုံး တိုက်ခိုက်ကောင်းတိုက်ခိုက်ရလိမ့်မည်ဆို၏။မတ့်ခ်ျ3ရက် နေ့တွင် ယူနန်ပြည်နယ် တာဝန်ရှိ တရုတ်ဆက်ဆံရေးအဖွဲ့ကလည်း ၀ ဌာနချုပ်ပန်ဆန်းသို့ ရောက်လာပြီး စစ်မဖြစ်ရေးအတွက် အပေးအယူအလျှော့အတင်းပြုပြီး ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးအဖြေရှာကြပါရန်ပြောကြားတိုက်တွန်းခဲ့သေး သည်ဟု စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။“ နအဖ ဖွဲ့စည်းပုံက ကျနော်တို့ ၀ အမျိုးသားတွေအတွက် ဘာအခွင့်အရေးမှ ပေးမထားဘူး။ လုံးလုံး လက်ခံလိုက် မယ်ဆိုရင် အခွင့်အရေးဆိုတာဘာမှ ရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ တိုင်းရင်းသား တန်းတူအခွင့်အရေးအတွက် ကျနော်တို့ဗမာပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီခေတ်ကတည်းက တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြတာဘဲ” - ဟု ၀ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင် များက ပြန်လည်ပြောကြားကြောင်း အမည်မဖေါ်လိုသည့် ၀ အရာရှိတဦးကပြောပါသည်။လက်ရှိ ၀ ပြည်သွေးစည်းရေးတပ်မတော် ထိန်းချုပ်နယ်မြေ“ လဆန်းပိုင်း 3-4 ရက်နေ့လောက်မှာ ဗမာတပ် တပ်မ 77 က စစ်အင်အားအချို့နဲ့ စားနပ်ရိက္ခာ အပြည့် ကားအစီး 100 ထက်မနည်း သုံးဖက်သုံးတန်ခွဲပြီး ၀ နယ်ခြားဘက် ဦးတည်သွားတယ်။ ညဘက်ဘဲခရီးထွက် တယ်၊သူတို့အပြောက က တော့ တပ်အပြောင်းအလဲတဲ့။ အမှန်တော့ တပ်မ 77 က အသစ်ထပ်တက်လာ တဲ့ တပ်တွေ” – ဟု လားရှိုးဒေသခံတဦးက ပြောပြပါသည်။တပ်မ 77 နှင့် 33 စစ်ယာဉ်တန်းသည် သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးတွင် လမ်းသုံးသွယ်ခွဲ၍ ၀ နယ်ဘက် အသီး သီးခရီးဆက်ကြကြောင်း၊ (၁) လားရှိုး - သိန္နီ - ကွန်လုံ - ဟိုပန် (မိုင်းမော၊ နမ့်တစ် ၀ နယ် ၏ အနောက်မြောက်ဘက် တလွှား)၊(2) လားရှိုး - မုန်းယော် - တာ့ဆိုင်းလျဲန် (သံလွင်ကူးတို့ဆိပ်)၊ (3) လားရှိုး - နမ့်ပေါင့် - တန့်ယန်း (တာ့ကောင်း အက် မြစ်ကူးသံတား) လမ်းဘက်သို့ ဦးတည်နေသည်ဟုဆို၏။“ဗမာ့စစ်တပ်က သူခြိမ်းခြောက်တဲ့ အတိုင်းတကယ်လုပ်ရဲမယ်ဆိုရင် 80% က တိုက်ဖို့များနေတယ်၊ အလ ကားသက်သက် ခြိမ်းခြောက်ရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး။ အခု အခြေအနေက မပေါက်ကွဲရင်မပြီးဘူး” – ဟု အဆိုပါ အမည်မဖေါ်လိုသည့် ၀ အရာရှိကပြောပါသည်။လက်ရှိအခြေအနေအရ နအဖတပ်က စားနပ်ရိက္ခာများလည်း အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားကြောင်း တိုက်ပွဲ ဆင်နွှဲ မည်ဆိုပါက အမြန်ဆုံးအင်အားဖြည့်တိုက်ခိုက်နိုင်ရန်အတွက်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ရေးအကဲခတ်များက ဆိုသည်။ထို့အတူ 2009 နှစ်ဦးပိုင်းက စတင်ချဲ့ထွင်ပြင်ဆင်သည့် မိုင် 40 ခန့်ရှည်သော မိုင်းရှူး - တာ့ဝန်းနောင်း ကျောက်ခင်း လမ်းလည်း 80% ကျော်ပြီးစီ်းနေပြီဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါလမ်းသည် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ ခေတ်ကတည်းက ဖေါက်လုပ်ထားသော်လည်း နှစ်ပေါင်း 20 ကျော် လမ်းဟောင်းလမ်းပြတ်အဆင့်ထားပြီး ယခုမှပြန်လည်ပြုပြင်လာခြင်း သည် စစ်ရေးမဟာဗျူဟာအတွက် အသုံးပြုဖို့သာဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်သူများ က ပြောဆိုနေကြပါသည်။“အခုကျောက်တွေ သဲတွေ အထပ်ထပ်ခင်းတယ်၊ ပြီးတဲ့အဆင့်ဖြစ်နေပြီ။ မိုင်းရှူးကနေ ကားမောင်းရင်4နာရီ လောက်ဘဲ သံလွင်မြစ်ကိုရောက်ပြီ၊ အဲမှာကားတွေတင်နိုင်တဲ့ သံလွင်မြစ်ကူးစက်လှေအကြီးစားလဲ3စင်းလောက်ရှိနေပြီ” - ဟု ဒေသခံများက ပြောပြပါသည်။အဆိုပါလမ်းပိုင်းတည်ဆောက်မှုတွင် ဒေသခံလုပ်အားပေးခေါ်ခြင်းမပြုလုပ်ကြောင်း။ နေ့စဉ်လုပ်အားခ ငွေ ပေးချေပြီး (စစ်တပ်/သား နှင့် မိသားစုများသာငှားလုပ်သော) တရက် အလုပ်သမား 200-300 ရှိကြောင်း သိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့် မတ်ခ်ျ3ရက်ကလဲ အမည်မသိလူတစုက အဆိုပါလမ်းပြုပြင်ရေးတွင် အသုံးပြုသည့် လမ်းကြိတ်စက်တစီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့သေး သည်ဟု ဒေသခံများကဆက်ပြောပြပါသည်။၀ တပ်ဘက် ပြန်ကြည့်မည်ဆိုပါက ဖေဖေါ်ဝါရီ 25 ရက် တန့်ယန်း တွေ့ဆုံပွဲပြီးနောက် ပိုင်း နအဖ ဘက်စစ်ရေးပြင်ဆင် သကဲ့သို. ၀ ဘက်က လည်း အဆင်သင့်ပြင်ဆင်မှု ရှိနေကြောင်း ပန်ဆန်း ဒေသခံတဦးက ဤကဲ့သို့ပြောပြပါသည်။“အရင်တုန်းက တပ်မဟာမှူးတွေက အလုပ်သိပ်မများရင် ဌာနချုပ်ဘဲလာနေလေ့ရှိတယ်လေ၊ အခုတော့ အဲလို မဟုတ်ဘူး။ ဗမာတပ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်တဲ့ နမ့်တစ်ဘက်၊ မန်းဆိုင်၊ မော်ဖှ၊ မိုင်းပေါက်၊ မိုင်းဖျဲန် ဘက်မှာအသင့်အနေအထား အတွက် ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာစာမှာဘဲ အချိန်ပြည့်သွားကွပ်ကဲနေကြတယ်”၀ နယ်တောင်ဘက်ပိုင်းတွင် စစ်ရေးပြင်ဆင်မှု မထင်ရှားသော်လည်း မြောက်ပိုင်းဌာနချုပ်နှင့် နအဖ ဆက်ရေးမပြေလည် သောကြောင့် စစ်ရေးအတွက်စိုးရိမ်နေရသည်ဟု မိုင်းတုံဒေသခံတဦးကလည်းပြော၏။တောင်ပိုင်းဝ တပ်မှူးတဦးက အဆိုပါမိုင်းတုံဒေသခံအား နအဖ စစ်ယာဉ်တန်းများ ထူးထူးခြားခြား သံလွင်အရှေ့ ဘက်ခြမ်းသို့ကူးလာသည်ဟု သတင်းရလျှရချင်း မဆိုင်းမတွသတင်းပို့ပေးရန် အကူအညီတောင်း ထားသည် ဟုလည်းဆို၏။“တကယ်လို့ ဗမာတပ်တွေ အမြောက်အများကူးလာရင် တကယ်တိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့သဘော။ သူတို. ၀ တပ်မိသားစု အချိန်မှီ အပြောင်းအရွှေ့ လုပ်နိုင်အောင်ပေါ့” - ဟု အဆိုပါ မိုင်းတုံဒေသခံက ပြောပြပါသည်။တောင်ပိုင်း ၀ နယ်မြေ အမှတ် 171 စစ်ဒေသတွင် မိုင်းဆတ် မြို့နယ်ရှိ ၀မ်ဟုံ့၊ မိုင်းယွန်းဒေသ၊ မိုင်းတုံမြို့ နယ်ရှိ ဟွေ့အော့ နှင့် မိုင်းကျွတ်ဒေသများမှ မြောက်ပိုင်း ၀ နယ် တို. တပ်ရုပ်ပေးရန်။ ထို့အတူမြောက်ပိုင်း ၀ နယ်ရှိ(မိုင်းယန်း မြို့နယ်) မိုင်းဖျဲန် မိုင်းပေါက်ဒေသအားလည်း နအဖ ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်း ၀ ဘက်မှ တပ်ရုပ် ပေးရန်။ ထိုတောင်းဆိုချက် အတိုင်း ယခုလ 10 ရက်မှ 15 ရက်အတွင်း ၀ တပ်ဖွဲ့လိုက်နာခြင်းမရှိကအင်အား သုံးတိုက်ခိုက်နိုင်ခြေရှိသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ရာဇဒဏ်ပေးလာခြင်းဖြစ်သည်။တန်.ယန်းတွေ.ဆုံပွဲမတိုင်မီ နယ်စပ်လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်ဖြင့် ၀ နယ်ထဲ တပ်မနှစ်ခု စေလွတ်မည်ဟုစစ်အစိုးရ ခြိမ်းခြောက်ချိန်မှစ၍ ၀ ပြည်သွေးစည်းရေး တပ်မတော်ကလည်း “မည်သည့် တပ်ဖွဲ့မဆို ၀ နယ်ထဲခြေတလှမ်းကျွံဝင် လာပါက မိမိကိုယ်မိမိ ခုခံကာကွယ်ဖို့ပစ်မိန့်ပေးထားတယ် ” - ဟု ၀ စစ်ဘက် ရေးရာ အရာ ရှိတဦးကလည်းပြောဖူး၏။၀ နယ်ခြားမျဉ်းတလျှောက် ပြီးခဲ့သည့် အပတ်က၀င်လာသည့် တပ်မ 77 အပြင် ပန်လုံ ဟိုပန်ဒေသ (၀ နယ်မြောက်ဘက် ပိုင်း) တပ်မ 99 ၊ တပ်မ 33 နှင့် 55 အချို့ကလည်း အပစ်ရပ်သျှမ်းပြည်တပ်မတော်နယ်မြေ အတွင်းတွင် ၀င်ရောက် နေရာယူထားပြီးဖြစ်သည်ဟု စစ်ရေးလေ့လာသူများက သျှမ်းသံတော်ဆင့်သို့ ပြောပြပါသည်။နအဖ ၏ 2008 ဖွဲ့ စည်းပုံတွင် ဟိုပန်၊ ပန်ဝိုင်၊ နားဖန်း၊ မက်မန်း၊ မိုင်းမော နှင့် ပန်ဆန်6းမြို့ နယ်အား ၀ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရဒေသတိုင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ သို့သော် တဘက်တွင်လည်း ရှိရင်း ၀ တပ် အင်3သောင်းခန့်အား တပ်ရင်း5ရင်း (တစ်ရင်းအင်အား 320 ယောက်) အထိ လျှော့ချပြီး နယ်ခြားစောင့်တပ် အသွင်ပြောင်းရန်၊ထိုတပ်ရင်းတိုင်း တွင်လည်း နအဖ အရာရှိ အယောက် 30 ပါဝင်ရန် နအဖ က ကန့်သတ် ထားသည်။ ထိုဖိအားအတိုင်းလိုက်နာဆောက်ရွက် ရန်၊ သို့မဟုတ် အင်အားသုံး တိုက်ခိုက်မည် ဟု ဤကဲ့သို့ ဖိအားပေးလာခြင်းဖြစ်သည်။အဆိုပါ ဖိအားပေးမှုအပေါ် ပေါက်ယူချမ်းခေါင်းဆောင်သည့် ၀ တပ်ဖွဲ့ကလည်း ၀ ပြည်သည် ပြည်ထောင်စု အစိတ် အပိုင်းတခုဖြစ်ကြောင်း၊ ခွဲထွက်ရန်လည်းဆန္ဒမရှိကြောင်း သို့သော် တန်းတူအခွင့်အရေးအရ ၀ အမျိုးသားတို့အတွက် လက်ရှိ ၀ နေထိုင်နေသည့်အတိုင်း ၀ ပြည်သတ်မှတ်ရန်၊ အသွင်ပြောင်းတပ်တွင် ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်နေရာမှတပါး အခြားအရာရှိများ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားအဖွဲ့များ လက်မခံသည့် အပြင် ၀ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ ပြည်သူ.စစ်တပ်ဖွဲ့ထားရှိရေး နှင့် ပင်စင်ယူမည့်ပုဂ္ဂိုလ် (5 နှစ် လစာ တခါတည်းပေးရန်) စားဝတ်နေရေးအတွက် နအဖ မှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးရန် -- ဟူသည့် အချက်9ချက် တောင်းဆိုထား သည်။၀ တို.၏တောင်းဆိုချက်များအားလုံး နအဖ က လုံးဝပါယ်ချထားပြီး 2008 ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်းဖြစ်မြောက်ရန် အတွက် တဘက်သက်ဖိအားပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။http://www.mongloi.org/burmese/
၈၂ ကြိမ်မြောက် အကယ်ဒမီ ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ပေးပွဲအခမ်းအနား
ဂျပန် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင် The Cove ဆုရရှိသွား၍Burma VJ ဇာတ်ကားအော်စကာဆု နှင့် လွဲ အကောင်းဆုံးမင်းသမီးဆု ……………………………….The Blind Side ဇာတ်ကားမှ ဆန်ဒရာဘူ လောခ်အကောင်းဆုံးမင်းသားဆု ………………………………..The Crazy Heart ဇာတ်ကားမှ Jeff Bridges အကောင်းဆုံးဇာတ်ပို့ မင်းသမီးဆု ……………………….Precious ဇာတ်ကားမှ Mo ‘ Niqueအကောင်းဆုံးအမျိုးသား ဇာတ်ပို့ ဆု …………………….Inglorious Basterds ဇာတ်ကားမှ” Christopher Waltz “အကောင်းဆုံးနိုင်ငံခြားဘာသာစကားပြောဇာတ်ကားဆု.. “The Secret in Their Eyes,” from Argentina. • အကောင်းဆုံး အနုပညာ ရိုက်ကွင်းဆု : “Avatar”• အကောင်းဆုံးအသံတည်းဖြတ်မှုဆု : “The Hurt Locker”•အကောင်းဆုံးဝတ်စားဆင်ယဉ်မှုဆု : Sandy Powell for “The Young Victoria”.အကောင်းဆူံးမိတ်ကပ်ဆု : “Star Trek”အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ဆု : “THE Cove “(ဂျပန်)အကောင်းဆုံး အမြင်ဆိုင်ရာ အထူးပြုလုပ်ချက်ဆု:”Avatar”Best animated film goes to “Up.” ၈၂ ကြိမ်မြောက် အမေရိကန် ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား ကို ဤနေရာ မှတစ်ဆင့် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှု နိုင်သည် Go To Oscar Live Blog ဆန်ဒရာဘူလောခ် ၊ကတ်သရင် ဘီဂယ်လို၊မိုနစ်၊ဂျဖ် ဘရစ်၊ခရစ္စတိုဖာဝေါဇ်၊Up Animation ဇာတ်ကားဒါရိုက်တာ Pete Doctor အကောင်းဆုံး အော်စကာဖက်ရှင် အဖြစ် စိတ်ဝင်စားခြင်းခံရသည့် ပယ်နီလိုပီ ခရုဇ် နှင့် ဂျနီဖာ လိုပက်ဇ်ွှThe Blind Side ဇာတ်ကားဖြင့်အကောင်းဆုံးဇာတ်ပို့ မင်းသမီးဆုရရှိသွားသည့် ဆန်ဒရာ ဘူလောခ် ၈၂ ကြိမ်မြောက်အော်စကာဆုပေးပွဲတွင် Burma VJ ဇာတ်ကားအတွက် ဆုလက်ခံရယူရန် တက်ရောက်သည့် မြန်မာ ဘုန်းတော်ကြီး ဦးပညာဇောတ ၊ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီး အော်စကာ ဆုပေးပွဲ သို့ တက်ရောက် သည့် သတင်း ပါရှိလာသည် ကြား၍ ယနေ့ မနက် ဆွမ်းခံ မထွက် ဘဲ စလောင်းရှိ ရာ အပြေးသွား သည့် သရက်တော ကျောင်းတိုက်မှ ကိုရင် နှစ်ပါး http://freedomnewsgroup.com/ မှပြန်လည်ဖေါ်ပြပါသည်။
စစ်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲ ပြင်ချိန် အတိုက်အခံ သဘောကွဲ
လာရီဂျေဂင် Monday, 08 March 2010 16:08 ဘန်ကောက် (မဇ္ဈိမ)။ ။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက ၂ဝ၁ဝ မှာ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပလိမ့်မယ်လို့ လူတိုင်းကို လိုက်ပြောနေပေမယ့် အရာအားလုံးကိုတော့ လျှို့ဝှက်ထားပါတယ်။ ''မြန်မာနိုင်ငံတော်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ လွှတ်တော်အဖွဲ့ဝင်တွေကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ဖို့ ဒီနှစ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲတွေကို ကျင်းပပေးမှာဖြစ်တယ်'' လို့ အခုအပတ်အစောပိုင်း ထုတ်ဝေတဲ့ အစိုးရထုတ် နေ့စဉ်သတင်းစာတိုင်းရဲ့ ရှေ့ဆုံးစာမျက်နှာရှိ တောင်သူလယ်သမားနေ့အထိမ်းအမှတ်ထုတ်ပြန်တဲ့ သူရဲ့ ကြေညာချက်မှာ ဖတ်ရှုရပါတယ်။ နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ ၆ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရှိတဲ့ တောင်သူလယ်သမားတွေကိုလည်း ငြိမ်ချမ်းပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံ တည်ဆောက်နိုင်တဲ့၊ ဒီမိုကရေစီကို မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးချနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသာ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြဖို့ တိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တကယ်တမ်းပြောရရင် သတိပေးချက်တွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ ''တိုင်းတပါးသားတို့ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ ငြိမ်ချမ်းရေးနဲ့ တည်ငြိမ်ရေးကို နှောင့်ယှက်ဖျက်ဆီးမယ့် သူတွေရဲ့ အန္တရာယ်ကိုလည်း သတိကြီးကြီးထားရမှာဖြစ်တယ်'' လို့ သူက ဆိုပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးအနေနဲ့ အဆင့် ၇ ဆင့်ပါ လမ်းပြမြေပုံရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတရပ်အနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတေးကို သီဆိုနေရတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ လမ်းခရီးမှာ ကြုံတွေ့ရမယ့် အခက်အခဲ၊ အတားအဆီးတွေလည်း ပြည့်နှက်နေပုံ ပေါ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကို ဒီနှစ် အကုန်ပိုင်းလောက်မှာ ကျင်းပမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ သံသယ မရှိပေမယ့်လို့ ဘယ်သူမှ ဒီထက်ပိုပြီး မသိပါဘူး။ပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာများမှာ အစိုးရက တရားဝင် ထုတ်ပြန်ချက်တွေကလွဲလို့ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ် တွန်မတ်စ် အိုဂျာ ကွင်တာနာရဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည် အရီးစဉ်အပြီးမှာ ပြောခဲ့တဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေ အပါအဝင် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်သမျှ သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြဖို့ တားမြစ်ထားပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲက လူတိုင်းကို ခန့်မှန်းချက်တွေသာ ထွက်ပေါ်လာစေပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရေး၊ ဒါမှမဟုတ် အတူတကွ ဝိုင်းဝန်းသပိတ်မှောက်ရေးကို မဆုံးဖြတ်နိုင်သေးတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှု အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်းမှာ မသေချာ မရေရာမှုနဲ့ စိတ်ပျက်ဒေါသထွက်မှုတွေကိုပဲ ပေါ်ပေါက်စေပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသေးအဖွဲ့ကစပြီး စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်တဲ့ စစ်အုပ်စုရဲ့ ထိပ်သီးစစ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကတော့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ကျင်းပပေးမယ်၊ ပြီးတော့ အဲဒီရွေးကောက်ပွဲတွေဟာ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတစေရမယ် ဆိုတာကိုပဲ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောဆိုနေတာပါ။ ဒါဟာ ပြည်သူလူထုအတွက် မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်မှုကို လုပ်ဖို့အတွက် အခွင့်အရေးပဲလို့ ဒီနှစ် အစောပိုင်းတုန်းက သူက သတိပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ လူထုကတော့ ဝေခွဲမရဖြစ်ပြီး ကြောက်ရွံ့နေကြတာ အံ့သြစရာမရှိဘူးလို့ မြန်မာ့လူမှုရေး သုတေသီနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း ဒေါက်တာ ခင်ဇော်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ အခု လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေဟာ အရာအားလုံးကို လွှမ်းမိုးထားပါတယ်။ လူတိုင်းရဲ့ နှုတ်ဖျားမှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကိစ္စတွေကပဲ နေရာယူထားတာပါ။ ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်မယ့် နေ့ရက်ကို မကြေညာသေးဘဲ ပါတီမှတ်ပုံတင်ဖို့လည်း အတိအကျ မသိရသေးပေမယ့် စစ်အစိုးရလိုလားသူ အုပ်စုတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကို ပြုလုပ်နေပါပြီ။ အဲဒါကြောင့်လည်း ရလဒ်အဖြစ် အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး လုံးဝ မသိကျိုးကျွံပြုလုပ်နေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။''ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေ ကျနော်တို့ခေါင်းပေါ် ပျံဝဲနေသလိုပဲ'' ဟု အငြိမ်းစား အစိုးရဝန်ထမ်း ဦးအေးဝင်းက ပြောပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့ ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ မဟာဗျူဟာရဲ့ အဓိကအစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ အဲဒါကတော့ လူတိုင်းက ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းကို ခန့်မှန်းပြောဆိုနေချိန်မှာ သူကတော့ စည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေကို တင်ကြိုပြီး ကောင်းကောင်း စီစဉ်ထားနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ မဲပုံးထက်စာရင် စစ်မြေမြင်မှာသာ ပိုပြီး အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် အနာဂတ်နိုင်ငံရေးကို လုံးဝ ဥသုဉ် ချုပ်ကိုင်နိုင်ရေးအတွက် စစ်မဟာဗျူဟာ အတိုင်းချမှတ် အကောင်အထည်ဖေါ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ စစ်ဘုရင်တွေက အခွင့်အရေး အနည်းငယ်မျှတောင်မှ သူများကိုမပေးနိုင်နေတာပါ။ တကယ်တမ်းမှာ လူထုရဲ့ စိတ်ဆန္ဒကို အလွယ်တကူစွဲဆောင်နိုင်ရေးမှာ သူတို့ အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ နားမလည်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်နေတဲ့အတွက် သူတို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်လာ မှာပါ။ ''မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူတိုင်းက ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းကိုပဲ ပြောဆိုနေကြတာပါ'' လို့ သြစတြေးလျ လွှတ်တော်အမတ်နဲ့ မြန်မာ့အရေးကျွမ်းကျင်သူ ဂျနယ်လီ ဆဖင်က မကြာသေးခင်ကမှ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားတဲ့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ခရီးစဉ်အပြီးမှာ မဇ္ဈိမကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ''အဲဒါဟာ ကောင်းလား၊ ဆိုးလားဆိုတာကို လူတိုင်းက သဘောကွဲလွဲနေကြတယ်။ သူတို့ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်သင့်လား ဆိုတာကိုလည်း ဝေခွဲမရကြဘူး။ စီးပွားရေးအသိုင်းအဝိုင်းမှာကို သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေ ရှိနေတယ်'' လို့ သူက ပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအနေနဲ့ မကြာခင်မှာပဲ သူ့ရဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို တင်ရတော့မှာပါ။ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေနဲ့ ပါတီမှတ်ပုံတင်ရေးကိစ္စတွေဟာ လာမယ့် သီတင်းပတ်တွေအတွင်း ထွက်လာလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ချေအရှိဆုံးကတော့ သင်္ကြန်မတိုင်မီပါ။ လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ် တွန်မတ်စ် အိုဂျာ ကွင်တာနာက မကြာသေးခင် သွားခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးဖို့ အာသီသရှိပေမယ့် စစ်အစိုးရကတော့ အားတက်သရောမရှိလှဘဲ ဒီကိစ္စကို ပြောဆိုဖို့ ရှောင်ရှားနေပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းကို ထိန်းချုပ်ဖို့ တာဝန်ရှိတဲ့ ထိပ်တန်း စစ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး၊ ရှေ့နေချုပ်၊ တရားသူကြီးချုပ်နဲ့ ရဲချုပ် အစရှိသူတွေနဲ့ သူ့ရဲ့ ခရီးစဉ်အဆုံး နေပြည်တော်မှာ တွေ့ဆုံတဲ့အခါ အသေးစိတ်ကို မပြောဆိုဘဲ ဥပဒေမူကြမ်းတွေကို ပြင်ဆင်ထားပြီး ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေလည်း အချိန်မီ ပေါ်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်လို့သာ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဥပဒေတွေ ရေးဆွဲနေတယ်လို့ ပြောတာဟာ သက်သက်မဲ့ အကြောင်းပြချက် ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ရှင်းနေပြီး အမှန်ကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရဲ့ အတည်ပြုချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေတာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ စစ်အစိုးရလိုလားသူ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရတဲ့အခါ တခဲနက်ထောက်ခံချက်ရဖို့ စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ အားထုတ်ကြိုးပမ်းချက်တွေကိုတော့ ရပ်တန့်မနေပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံတဝှန်းလုံးမှာ နှစ်ပေါင်း ၂ဝ အတွင်း တိုင်းပြည်ရဲ့ ပထမဆုံး ရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိတ်တဆိတ် ပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်။ အစိုးရဝန်ကြီးတွေနဲ့ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေက နိုင်ငံရေး မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကို စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်လို့ အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားရဲ့ လည်ပတ်မှုတွေကိုလည်း ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပါပြီ။ အစိုးရထိန်းချုပ်တဲ့ သတင်းစာတွေနဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားတွေမှာ စစ်အစိုးရဝန်ကြီးတွေက ဒေသခံတွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းတွေကို တက်ရောက်ဖွင့်လှစ်နေတဲ့ သတင်းတွေ၊ ဒေသခံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီး အလှူငွေပေးအပ်နေတဲ့ သတင်းတွေကိုသာ တင်ပြပေးနေပါတယ်။ အမှန်မှာ ဒီနှစ်အစောပိုင်းကတည်းက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက အပတ်စဉ် ဝန်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကို ရွှေ့လိုက်ပြီး ဝန်ကြီးတွေကို သူတို့ တာဝန်ယူထားတဲ့ ဒေသတွေကို ကြာသပတေးနေ့ကနေ တနင်္ဂနွေနေ့အထိ သွားရောက်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီတွေ သွားပေးနိုင်အောင်နဲ့ ထောက်ခံမှုရဖို့ အခြားအရာတွေ ပေးနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးထားခဲ့တာပါ။ ''ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်မှုနဲ့ မပတ်သက်တဲ့ တခြားဆုံးဖြတ်ချက်တွေ အားလုံးကို မချမှတ်တော့ဘူး'' လို့ ရန်ကုန်ရှိ အမည်မဖော်လိုတဲ့ ကုလသမဂ္ဂအရာရှိတဦးက ပြောပါတယ်။ အရေးပါတဲ့ စီမံကိန်း အသစ်တချို့ကို ရွေးကောက်ပွဲပြီးမှသာ စတင်နိုင်မယ်လို့ အစိုးရဝန်ကြီးတွေက မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသမဂ္ဂအရာရှိတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့အစည်းတွေကို ပြောပါတယ်။ ဥရောပက အစိုးရ မဟုတ်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေက လောလောဆယ် ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ဧပြီလအထိသာ စီစဉ်ထားတယ်လို့ ဘန်ကောက်ကနေ မြန်မာပြည်ကို စောင့်ကြည့်လေ့လာနေတဲ့ ဥရောပ သံတမန်တဦးက ပြောပါတယ်။ စစ်တပ်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အဆိုအရ အဂတိလိုက်စားတယ်လို့ နာမည်ကြီးတဲ့ စက်မှု ၁ ဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်းကို ရွေးကောက်ပွဲ မဲဆွယ်စည်းရုံးဖို့နဲ့ စစ်အစိုးရလိုလားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအတွက် ငွေကြေး ထောက်ပံ့ရေးကို တာဝန်ပေးထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ချင်မှ ဝင်မှာဖြစ်ပေမယ့် စစ်အစိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေကို စီမံခန့်ခွဲဖို့ အဓိက စီစဉ်သူအဖြစ် စစ်ခေါင်းဆောင်က မျှော်လင့်ထားပုံရပါတယ်။ စစ်အစိုးရ မူဝါဒကို ထောက်ခံဖို့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅ နှစ်လောက်ကတည်းက ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စစ်အစိုးရ ကျောထောက်နောက်ခံပြု ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကြီး (ကြံ့ဖွံ့) က ရွေးကောက်ပွဲအတွက် စစ်အစိုးရလိုလားသူ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိမ့်မယ်လို့ စစ်တပ်နဲ့ နီးစပ်တဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အဆိုအရ သိရပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ (တစည) ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမှာ စစ်တပ်ဘက်တော်သား ပါတီဖြစ်ခဲ့ပြီး အခု ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဟာဗျူဟာမှာလည်း ထပ်မံအားဖြည့်ထားပါတယ်။ ထိပ်တန်း စစ်အစိုးရ အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ အဆိုအရ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီဟာ စစ်တပ်ရဲ့ ညီအမပါတီ ဖြစ်တယ်လို့ တပ်မတော်သားတွေကို ပြောဆိုနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာ ကွင်တာနာက ပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းက ရန်ကုန်မှာ တစည ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ သူတို့က သူတို့ပါတီရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို ရွေးချယ်ပြီးစီးခဲ့ပြီး ပါတီမူဝါဒတွေကိုလည်း ချမှတ်ပြီးပြီလို့ ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တနိုင်ငံလုံးမှာ ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေကို ပြုလုပ်နေပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေမထွက်သေးခင် ဒီလိုလုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ တကယ်တော့ တရားမဝင်ပါဘူး။ဒီလို လုပ်ဆောင်ချက်မျိုးဟာ အတိုက်အခံတွေ ဘယ်လိုမှ လုပ်ခွင့်မရတဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အစိုးရကို အတော်အသင့် ဝေဖန်လေ့ရှိတဲ့၊ အသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီး ပါတီမှတ်ပုံမတင်ရသေးတဲ့ ညီညွတ်သော ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီကတော့ မနှစ်တုန်းက သူတို့ရဲ့ ပါတီဖွဲ့စည်းခြင်း အထိမ်းအမှတ် အစည်းအဝေး ကျင်းပတာကို အာဏာပိုင်တွေဘက်က သူတို့ခွင့်ပြုချက်မရသေးဘဲ နောက်ထပ် မလုပ်ဖို့ ခေါ်ယူသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ ဥပဒေအရ လူ ၅ ဦးထက်ပိုပြီး မစုဝေးဖို့ တားမြစ်ထားကြောင်းနဲ့ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ခဲ့ရင် ၇ နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ်ကျ ခံရမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့တယ်။နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရတဲ့ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ခေါင်းဆောင်တဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ မထွက်သေးသရွေ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ ဖြည့်ဆည်းရေး၊ မဖြည့်ဆည်းရေး ဆုံးဖြတ်ဦးမှာ မဟုတ်ဘဲ စောင့်ဆိုင်းဦးမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီအချင်းအရာကို ပြည်တွင်းက ပညာရှင်တွေနဲ့ စည်းရုံးလှုပ်ရှားသူ အများအပြားက သတိထားပြီး ဆန့်ကျင်နေတာပါ။ ''ရွေးကောက်ပွဲက အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီအခွင့်အရေးကို ကျနော်တို့ အခုအချိန်မှာ မရယူဘူးဆိုယင် အချိန် သိပ်နောက်ကျသွားလိမ့်မယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ထွက်မလာခင် ဆုံးဖြတ်ပြီး ပြင်ဆင်ထားမှ ဖြစ်မယ်'' လို့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသုဝေက မီဒီယာသမားတွေကို ချင်းမိုင်မှာ ပြောကြားသွားပါတယ်။ ''ပြည်သူလူထုက လက်ရှိ မြန်မာအစိုးရကို မကြိုက်ဘူး'' လို့ သူက ပြောပါတယ်။ ''အခု လာမယ့် ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ မဲပေးခြင်းအားဖြင့် ဒါကို ကျနော်တို့ ပြောင်းလဲဖို့ အခွင့်အရေး ရှိလာပြီ'' လို့ ဆက်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းကတော့ ဒီလို ယူဆသူတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ''ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ဘာလို့ဝင်ပြိုင်ရမှာလဲ။ စစ်တပ်က အရာရာကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ထိန်းချုပ်ထားမှာ ဖြစ်တယ်'' လို့ ပြည်ပရောက် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုမှ ပုဂ္ဂိုလ်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးဇင်လင်းက ပြောပါတယ်။''ကျနော်တို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြောခွင့်မရဘူး။ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တွေ့ခွင့်မရဘူး၊ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆွေးနွေးလို့ မရဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဘယ်လိုလုပ် လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတွေ ဖြစ်မှာလဲ'' လို့ သူက ဆက်ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ ပြည်တွင်းက ဒေါက်တာခင်ဇော်ဝင်းတို့လို လူမှုစည်းရုံးလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ ဒီမိုကရေစီရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အတွက် အခွင့်အရေးတိုင်းကို ဆုတ်ကိုင်နိုင်ရမယ်လို့ဆိုပြီး ရွေးကောက်ပွဲတွေကနေ အဲဒီအခွင့်အရေးကို ပေးပါလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲရောက်တဲ့အခါ လူထုက ဒီမိုကရေစီကို ထောက်ခံတဲ့ ပါတီကိုပဲ မဲပေးပါလိမ့်မယ်လို့ သူက မဇ္ဈိမကို ပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေက သူတို့ရဲ့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် အတားအဆီး ဖြစ်နေပေမယ်လို့ ဒီမိုကရေစီအရေး လှုပ်ရှားကြိုးပမ်းသူတွေအတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ဖို့ တွန်းအားပေးနေပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် အတော်များများက ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း တင်သွင်းခြင်းအားဖြင့် မေးခွန်းထုတ်စရာ ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်ကို တရားဝင် သွားအောင် ပြုလုပ်ပေးသလိုဖြစ်မှာ စိုးရွံ့နေကြပေမယ့် မြန်မာအတော်များများကတော့ စစ်တပ်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး နောက်တကြိမ် မဲပေးခွင့်ရမယ့် အခြေအနေကို ငံ့လင့်နေကြပါတယ်။ ''ကျနော်တို့ လက်ခံသည်ဖြစ်စေ၊ လက်မခံသည်ဖြစ်စေ၊ ရွေးကောက်ပွဲကတော့ ဖြစ်မှာပဲ'' လို့ ရန်ကုန်ရှိ ရခိုင်လူငယ် ကိုညီညီက ပြောပါတယ်။ ''ကျနော်တို့မှာ မဲပေးဖို့ကလွဲလို့ တခြားရွေးချယ်ခွင့် မရှိဘူး။ ကျနော်တို့ အမျှော်လင့်နိုင်ဆုံးကတော့ စစ်တပ်ရဲ့ အလိုကျ ဆောင်ရွက်ပေးမယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း မဟုတ်သူတွေ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါလာဖို့ပဲ'' ''အမိုက်မှောင်ဆုံး ကာလတွေ ကျနော်တို့ကို ဖုံးလွှမ်းခဲ့ပါတယ်'' လို့ ဒေါက်တာခင်ဇော်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ ''ကျနော်တို့ အနှစ် ၂ဝ ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီအခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်ခံလိုက်ရင် ပြည်သူလူထုအတွက် ဒီထက်ပိုပြီး ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်'' လို့ သူက ဆက်ပြောပါတယ်။http://burmese.mizzimamedia.com/
စစ်အာဏာရှင် မြင်လို တွေ့လိုတဲ့ လူတန်းစားထဲ ကိုယ်ပါမသွားပါစေနဲ့
စစ်အာဏာရှင် မြင်လို တွေ့လိုတဲ့ လူတန်းစားထဲ ကိုယ်ပါမသွားပါစေနဲ့ NEJ / ၈ မတ် ၂၀၁၀ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့တွင် ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီ (၂၄) မှ (၂၆) ရက်အထိ မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂမှ ကြီးမှူးကျင်းပခဲ့သည့် သတ္တမ အကြိမ်မြောက် မြန်မာမီဒီယာညီလာခံတွင် ယခုနှစ် စစ်အစိုးရကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် မီဒီယာအခန်းကဏ္ဍကို အကျယ်တ၀င့် ဦးစားပေး ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ထိုသို့ ဆွေးနွေးတင်ပြမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူး ဦးစံမိုးဝေနှင့် ခေတ်ပြိုင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်။ မေး။ ။ ဒီနှစ်ထဲမှာ နအဖစစ်အစိုးရ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ အင်မတန်အရေးပါတယ်လို့ ဆွေးနွေးသွားကြပါတယ်။ ဘာကြောင့် ဒီလို အရေးပါတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်။ ဖြေ။ ။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ တရားမျှတမှုရှိဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ကျင်းပပေးတဲ့ အစိုးရသို့မဟုတ် အဖွဲ့က ပြည်သူလူထုကို အသိပေးစရာတွေ အများကြီးလိုသလို ၀င်ပြီးယှဉ်ပြိုင်မယ့်သူတွေကလည်း သူတို့ရဲ့ မူဝါဒတွေ လူထုကို အသိပေးရမှာဖြစ်တယ်။ လူထုအနေနဲ့ကလည်း မဲမပေးခင်မှာ သိချင်တာတွေ သိထားသင့်တာတွေ အများအပြားရှိတယ်။ ဒီတာဝန်တွေကို ကြားခံဆောင်ရွက်ပေးမှာ မီဒီယာဖြစ်တဲ့အတွက် လူရဲ့ခန္ဒာကိုယ်မှာ သွေးပြန်ကြောမကြီးတခု အရေးပါသလို ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်မယ်ဆိုရင် မီဒီယာရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ အရေးသိပ်ကြီးတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ မေး။ ။ မီဒီယာတွေအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်သင့်ပါသလဲ။ ဖြေ။ ။ အကြမ်းဖျင်းပြောရရင် အခန်း (၃) ခုရှိပါတယ်။ မတိုင်ခင်၊ ကျင်းပနေချိန်၊ ကျင်းပပြီးစီးချိန်ပေါ့။ သိသင့်သိထိုက်တာတွေ အသိပေးရမယ်၊ ဘယ်လိုပုံစံ မဲပေးရမယ်၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ မရိုးသားမှုတွေ ထောက်ပြရမယ်။ ပါဝင်လာအောင် ရွေးချယ်နိုင်ဖို့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်အောင် အချက်လက်တွေ စုဆောင်းပေးရမယ်။ တရားမျှတစွာ မဲဆွယ်နိုင်ခြင်း ရှိ မရှိ စောင့်ကြည့် ဝေဖန်ထောက်ပြရမယ်၊ မသမာမှုတွေရှိရင် ဖော်ထုတ်ပေးရမယ်။ ဒုတိယအနေနဲ့ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတစွာ မဲပေးနိုင်ခြင်း ရှိ မရှိ။ မဲရေတွက်တာတွေ စနစ်ကျနမှု ရှိရဲ့လား၊ မရိုးသားမှုတွေ ရှိနေသလား၊ ခြိမ်းခြောက်တာတွေ မဲဝယ်တာတွေ စသဖြင့် စောင့်ကြည့်တဲ့ တာဝန်ကိုယူရမယ် အရေးသိပ်ကြီးတယ်လို့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ အပြီးမှာတော့ အနိုင်ရတဲ့ပါတီရဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဘာတွေလုပ်ကြမှာလဲ။ အပြတ်သတ်နိုင်သလား၊ ညွန့်ပေါင်းဖွဲ့ကြမှာလား၊ အစိုးရအဖွဲ့မှာ ဘယ်သူတွေပါလာမလဲ၊ မှန်ကန်လျော်ကန်တဲ့လူတွေ ဖြစ်ရဲ့လား၊ ရွေးကောက်ပွဲကာလ မသမာမှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိုင်တန်းမှုတွေ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေမှာ တထောင့်တနေရာကနေ စောင့်ကြည့်ဝေဖန်တင်ပြတာတွေ လုပ်ရပါမယ်။ မေး။ ။ ပြည်တွင်းမှာ သတင်းပိတ်ဆို့မှုတွေ၊ သတင်းဆင်ဆာ ဖြတ်တောက်မှုတွေ၊ သတင်းထောက်တွေကို ဖမ်းဆီးနေတာတွေ၊ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုရေးသားခွင့် မရှိတာတွေ စတဲ့ စစ်အစိုးရရဲ့ ချုပ်ကိုင်မှုတွေအောက်မှာ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ သတင်းမှန်တွေ ဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ ဘယ်လိုဆောင်ရွက်နိုင်မှာပါလဲ။ ဖြေ။ ။ ဒီနေရာမှာတော့ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိတဲ့ ပြည်ပ သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍဟာ ပိုပြီး အရေးပါတယ်လို့ ပြောရပါမယ်။ ပြည်ပက မီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်း ပြည်သူလူထုရဲ့ တလေးတစား အားကိုးနားထောင် ကြည့်ရှုနေတာကို သတိထားပြီး အမြင်စောင်းမသွားရအောင် ဘက်မလိုက်ဘဲ မျှမျှတတ သတိကြပ်ကြပ်ထားပြီး သတင်းတွေထုတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ မေး။ ။ ပြည်တွင်းနဲ့ ပြည်ပမီဒီယာတွေ ဘယ်လို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင့်ပါသလဲ။ ဖြေ။ ။ တိုင်းပြည်နဲ့ ပြည်သူလူထုမျက်နှာကို ရှေးရှုပြီး အလုပ်တွေလုပ်ကြဖို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့ လိုပါတယ်။ အင်တာဗျူးတွေ ပေးရပါမယ်။ အဖြစ်အပျက်တွေကို ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံ ထိစပ်နေသူတွေ ဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်ခွင့် မရှိရင်တောင် လုပ်နိုင် ထုတ်နိုင် လွှင့်နိုင်တဲ့ ပြည်ပ သတင်းဌာနတွေအတွက် first hand sources လက်ဦးမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ သတင်းအရင်းမြစ်တွေအဖြစ် ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပေးကြမယ်ဆိုရင် သာမန်သတင်းပေးသူ ပြည်သူတွေထက် ပိုပြီး ထိရောက်တိကျ ပြည့်စုံတဲ့ သတင်းတွေကို ဖြန့်ချိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မေး။ ။ မြန်မာသတင်းသမဂ္ဂအနေနဲ့ လက်ရှိပြည်တွင်းနဲ့ ပြည်ပ မြန်မာသတင်းမီဒီယာတွေအပေါ် ဘယ်လိုရှုမြင် သုံးသပ်ပါသလဲ။ ဖြေ။ ။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အတိုင်းအတာ တစုံတရာရှိပေမယ့် အားရစရာတော့ မရှိလှသေးပါဘူး။ ပြည်ပမီဒီယာ အများစုဟာ အတိုက်အခံနိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူစိတ်မျိုး နည်းနည်း ဒါမှမဟုတ် မသိမသာကဲနေသူတွေ ဖြစ်နေတုန်းပဲလို့ ရိုးရိုးသားသား ပြောချင်ပါတယ်။ အဲဒီစိတ်ကို ထုတ်ပစ်နိုင်မှ ယုံကြည်ရတဲ့ သတင်းသမားကောင်းတွေ၊ သတင်းဌာနတွေ ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရင်ကထက်စာရင် အများကြီးတိုးတက်လာတယ် ဆိုရမှာပါ။ ပြည်တွင်းက မီဒီယာတွေကို ပြောရရင်တော့ သူတို့လုပ်ခွင့်ရှိသလောက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်နေကြတဲ့ သတင်းသမားတွေ တပုံကြီးရှိတာ ကျနော်သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နေရာတိုင်းမှာ စုန်းပြူးတွေတော့ ရှိတာပေါ့လေ။ သိတဲ့အတိုင်း နှစ်ပေါင်း လေးဆယ်ကျော် စစ်အစိုးရတွေ အဆက်ဆက်က အကြောက်တရားကို ဖိဖိစီးစီးသွတ်သွင်းပြီးတော့ အုပ်ချုပ်လာခဲ့တယ်။ လူမှုလူ့ဘောင် အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ လည်သူစားကြတဲ့ အကျင့်ပျက်စရိုက်တွေ အားကောင်းလာသလို မီဒီယာ အသိုင်းဝိုင်းထဲမှာလည်း အကျင့်ပျက်သမားတွေ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်၊ မဆန်းပါဘူး။ အာဏာရှိသူအကြိုက် လိုက်ဖားပြီး တကိုယ်ရေ ကောင်းစားရေး အလုပ်ဖြစ်အောင် လုပ်နေတဲ့ မီဒီယာသမားတွေ၊ နိုင်ငံရေးအမြတ် ၀င်ထုတ်ဖို့ ပြင်နေသူတွေလည်း တွေ့နေရတာပဲ၊ ပြည်သူတွေထဲက အမြင်ရှိသူတွေက သိနေပါတယ် သူတို့ကို။ မေး။ ။ မြန်မာပြည်သူလူထုကို ခေတ်ပြိုင်ကတဆင့် ဘာများ ပြောကြားလိုပါသလဲ။ ဖြေ။ ။ ဒီလို အချိန်ကာလဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ အကြားအမြင် ဗဟုသုတ ကြွယ်နေအောင် မီဒီယာတွေကို အမြဲသတိပြု လေ့လာနေဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်အဆင်ပြေနေရင် ပြီးရောဆိုတဲ့ စစ်အာဏာရှင် မြင်လို တွေ့လိုတဲ့ လူတန်းစားထဲ ကိုယ်ပါမသွားပါစေနဲ့။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အရေးဟာ ကိုယ့်အရေးတင် မဟုတ်ပါဘူး နောင်လာမယ့် ကိုယ့်မျိုးဆက်တွေ အဆက်ဆက် အမွေရသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ လုပ်သလောက် တော်သလောက် ကြိုးစားသလောက် ကိုယ်ခံစားနိုင်မယ့်ခေတ်ကို ရောက်အောင်၊ မှန်တာလုပ်ရင် ဘယ်သူ့ကိုမှ ကြောက်စရာမလိုတဲ့ စနစ်တခုကိုရောက်အောင်၊ တရားဥပဒေက မှန်မှန်ကန်ကန် အကာကွယ်ပေးတဲ့ နိုင်ငံတခုအဖြစ် ပြန်ရောက်အောင် လုပ်စရာရှိတာ လုပ်သင့်တာကို ရဲရဲ၊ ပြတ်ပြတ်သားသား လုပ်ကြရမယ့် အချိန်ရောက်နေပါပြီလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ မေး။ ။ အခုလို ဖြေပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဖြေ။ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။http://www.khitpyaing.org/interviews/2010/March/8310.php
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ ထုတ်ပြန်ချက်
ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်မတ်လ ၈ ရက်၊ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ၂၀၁၀ ခုနှစ် မတ်လ ၈ နေ့တွင် ကျရောက်သော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့တွင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (အေအေပီပီ) မှ အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများနှင့်ပတ်သက်သော အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာတစောင် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများဟာ မြန်မာပြည်တနံတလျား လူမှုအလွှာအသီးသီးမှဖြစ်ကြပြီး သူတို့ရဲ့နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက်များကြောင့် ထောင်သွင်းအကျဉ်းချခံရသူများဖြစ်ကြောင်းကို အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာက ဖော်ပြထားပါတယ်။ အကျဉ်းထောင်အသီးသီးရှိ အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများမှာ အသက်၂၁ နှစ် အရွယ်မှ အသက် ၆၈ အရွယ်အထိ အသက်အရွယ် အမျိုးမျိုး ပါဝင်ကြပါတယ်။ အကျဉ်းချုပ်အစီရင်ခံစာက အကျဉ်းထောင်အတွင်းမှာ ၁၁ နှစ်ကြာအောင်နေခဲ့ရပြီး ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုရရှိဖို့ အခက်အခဲ မျိုးစုံကို တွေ့ကြုံရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်ရဲ့ အတွေ့အကြုံကိုလည်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ အေအေပီပီရဲ့ စာရင်းဇယားများအရ မြန်မာပြည်ထောင်တွေထဲမှာ လက်ရှိအမျိုးသမီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူ ၁၇၇ ယောက်ရှိတယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ အမျိုးသမီးအများစုဟာ သူတို့ရဲ့ခင်ပွန်းတွေ သားသမီးတွေ၊ မိဖတွေနဲ့ ခွဲခွာခံထားရသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျန်းမာရေးအရစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရှိတဲ့ အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား သုံးယောက် အကြောင်းကို တင်ပြထားပြီး ပိုမိုသင့်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ ထောင်တွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်တခု ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့ အေအေပီပီက တောင်းဆိုထားတဲ့အကြောင်း အစီရင်ခံစာက ဆက်လက်ဖော်ပြ ထားပါတယ်။ အေအေပီပီ အတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူ ကိုတိတ်နိုင်က “ဒီအမျိုးသမီးတွေက အနာဂါတ် မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အားကိုအားထားပြုရမယ့် ကြီးမားတဲ့ အင်အားတွေ ဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့ကို သိက္ခာရှိရှိ လေးလေးစားစားဆက်ဆံပြီး အမြန်ဆုံး ပြန်လွှတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။” အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဒီမိုကရေစီရေးနဲ့ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ တတပ်တအား ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသူများဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့က တန်ဖိုးဖြတ်မရနိုင်တဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ကြမယ့် သူများဖြစ်ကြလို့ အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက် သူတို့ရဲ့ စွမ်းဆောင်မှု တွေကို အထူး လိုအပ်ပါတယ်။ အေအေပီပီမှ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုအဖြစ် မဖြစ်မနေလုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အားလုံး အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးနဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေး လုပ်ငန်းစဉ် တလျှောက် သူတို့တွေပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် တောင်းဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ)ဆက်သွယ်ရန် -ကိုတိတ်နိုင် ၆၆(၀)၈၁ ၂၈၇၈၇၅၁ကိုဘိုကြည် ၆၆(၀)၈၁ ၃၂၄ ၈၉၃၅နောက်ဆက်တွဲ ကြည့်ရန် -abrief on the women political prisoners in Burma Thanks N Regards,Aung Myo TheinAssistant Association for Political Prisoners (Burma)Web: http://www.aappb.org, http://www.fbppn.net, http://www.nd-burma.org"There can be no national reconciliation in Burma,as long as there are political prisoners." There is nothing more difficult to plan, more doubtful of success, more dangerous to manage, than the creation ofanew system. --Niccolo Machiavelli
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီး၏ တတိယအကြိမ်မြောက် ဂျာနယ်
http://xa.yimg.com/kq/groups/20354587/826886473/name/7310ABMAhttp://ifile.it/agf4x5o7310ABMA Journa Summary only...
ပြည်ထောင်စု အမျိုးသားကောင်စီ - မြန်မာနိုင်ငံ မှ မဟ...
၈၂ ကြိမ်မြောက် အကယ်ဒမီ ရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆု ပေးပွဲအခ...
စစ်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲ ပြင်ချိန် အတိုက်အခံ သဘောကွ...
စစ်အာဏာရှင် မြင်လို တွေ့လိုတဲ့ လူတန်းစားထဲ ကိုယ်ပါ...
၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ ထုတ်...